युक्रेनमा कसले पठाउदैछ मिग–२९ लडाकु विमान ? — Imandarmedia.com
युक्रेनमा कसले पठाउदैछ मिग–२९ लडाकु विमान ?
अल्जाजिरा। युक्रेनमा मिग–२९ लडाकु विमान पठाउने पोल्याण्डको प्रस्ताव अमेरिकाले अस्वीकार गरेको छ। अल्जाजिराका अनुसार जर्मनीको अमेरिकी एयरबेस मार्फत युक्रेनमा मिग–२९ लडाकु विमानहरू पठाउने पोल्याण्डको प्रस्तावलाई अमेरिकाले अस्वीकार गरेको हो।
यस प्रस्तावले सम्पूर्ण नेटो गठबन्धनका लागि गम्भीर चिन्ता गर्ने अमेरिकी भनाइ रहेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले आफ्नो देशको वायुसेनालाई थप लडाकु विमान चाहिएको बताएपछि पोल्यान्डले आफ्ना लडाकु विमानहरु युक्रेन पठाउन जर्मनीस्थित अमेरिकी बेस प्रयोग गर्न चाहेको थियो।
तर अमेरिकी बेसबाट लडाकु विमान युक्रेनमा रुसविरुद्ध जाँदा त्यसले खतरा उत्पन्न हुने भन्दै अमेरिकाले पोल्यान्डको माग अस्वीकार गरेको हो।रुसले युक्रेनको भूमिमा विदेशी सेना उत्रिएको खण्डमा आफूले परमाणु हतियार प्रयोग गर्ने संकेत दिइसकेको छ।
रुसले त्यसो भएमा तेस्रो विश्व युद्ध निम्तनसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ। रुसले युक्रेनमा आक्रमण थालेको आज १४ दिन पुग्दैछ। युक्रेन उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य बन्ने खतरा बढेको भन्दै रुसले गत फेब्रुअरी २४ यता युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गरिरहेको हो।
मस्को पूर्व सोभियतकालिन राज्य युक्रेन नेटोमा सँधैको लागि प्रतिबन्धित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा थियो। उ पश्चिमा राष्ट्रबाट यसको ग्यारेन्टी चाहन्थ्यो।रुसले क्षेत्रीय सुरक्षामा चुनौती थपिएकाले पूर्वी युरोपबाट नेटोले सबै सैन्य गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने माग पनि गरिरहेको थियो।
तर पश्चिमा राष्ट्रहरुले रुसी मागलाई खारेज गरिरह्यो। पश्चिमा राष्ट्रका प्रमुखहरु यो भनिरहेका थिए कि युक्रेनको विदेशी नीतिको विषयमा रुसले दबाब दिन सक्दैन।
उनीहरुका अनुसार नेटोको खुला नीति अन्तर्गत कुनै पनि युरापेली राष्ट्रलाई सो समूहमा आवद्ध हुने अधिकार छ। युक्रेनले बारम्बार आफू नेटोको सदस्य राष्ट्र बन्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएको थियो। नेटोमा आवद्ध हुने विषय युक्रेनको संविधानमा नै लेखिएको छ।
अमेरिकासहित ३० देश आवद्ध नेटो गठबन्धनमा सामेल भएको खण्डमा युक्रेनको रक्षात्मक शक्ति बढ्ने थियो, किनभने नेटोको सिद्धान्त सामूहिक रक्षा हो। नेटोको स्थापना सन्धिको धारा ५ मा यसो भनिएको छ।
सहयोगी राष्ट्रविरुद्धको आक्रमण सबै सहयोगीहरू विरुद्धको आक्रमण हो। त्यसकारण सबै सदस्य राष्ट्र एकअर्काको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।नेटोको उद्देश्य राजनीतिक र सैन्य माध्यमबाट आफ्ना सदस्यहरूको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु रहेको छ।
त्यसकारण युक्रेन नेटोमा आवद्ध भइसकेको भए यतिबेला अन्य राष्ट्रले रुपमा आक्रमण गरिसक्थ्यो। रुसको मुख्य माग यो थियो कि युक्रेनलाई सँधैको लागि नेटो सदस्य हुन दिनु हुँदैन, त्यस्तै पूर्वी युरोपबाट नेटोका सैन्य गतिविधि बन्द हुनुपर्छ।
पश्चिमा राष्ट्रले रुसी माग खारेज गर्दा रुसले युक्रेनमा आक्रमण थाल्यो। तर युद्ध जारी रहँदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगायत पश्चिमी नेताहरूले युक्रेनको रक्षा गर्न सेना नपठाउने स्पष्ट पारिसकेका छन्।
नेटोको सदस्यता चाहिँदैनः जेलेन्स्की हिले नेटोको सदस्य बन्न चाहने युक्रेन यतिबेला आफ्ना मागहरुबाट टाढिएको छ। मंगलबार एबीसी टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा जेलेन्स्कीले नेटो संगठनलाई ‘कायर’ संगठनको संज्ञा दिए।
नेटोको सदस्य बन्न चाहने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की भन्छन्,हामी नेटोको सदस्य हुन चाहन्थ्यौं तर जब हामीलाई यो लाग्यो कि नेटो हामीलाई स्वीकार गर्न चाहँदैन हामीले त्यस समूहमा आवद्ध हुने प्रश्नलाई धेरै पछाडि छाडिसक्यौं।
उनी थप्छन्, नेटो विवादस्पद समूह हो जो रुससँग हुने टकरावदेखि डराउँछ। म त्यो देशको राष्ट्रपति हुन चाहन्न जो घुँडा टेकेर कुनै चिजको लागि भिख माग्छ। विद्रोहीसँग वार्ता जारी युक्रेनका दुई क्षेत्र लुहान्स्क र डानेट्स्क सरकार विरोधी क्षेत्र हुन्।
त्यहाँ रुस समर्थित विद्रोहीको बर्चस्व छ। सो क्षेत्रसँग यतिबेला वार्ता भइरहेको पनि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले बताएका छन्। यद्यपी सो दुई क्षेत्रलाई रुसले स्वतन्त्र राज्यको घोषणा गरिसकेको छ।
यस्तोमा जेलेन्स्कीले सो क्षेत्र युक्रेनकै भएको बताउँदै आगामी दिनमा ती क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्न सक्छन् भन्नेबारेमा छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। तेस्तै,रुसले युक्रेनमा आक्रमण बन्द गर्न आफू तयार भएको जनाएको छ।
यद्यपी रुसले आक्रमण बन्द गर्नपूर्व युक्रनले आफ्ना सर्तहरु मान्नुपर्ने जनाएको छ।यसैहप्ताको सोमबार मात्र रुसी सरकारका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले भनेका थिए, हामी तत्काल युक्रेनमा आक्रमण बन्द गर्छौं तर युक्रेनले केही सर्तहरुको पालना गर्नुपर्छ।
पेस्कोभका अनुसार युक्रेनले तत्काल रुसी सेनाविरुद्ध आक्रमण बन्द गर्नुपर्छ, संविधानमा बदलाव ल्याउनुपर्छ, तटस्थता स्थापना गर्नुपर्छ, क्राइमियालाई रुसी क्षेत्रको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ र डोनेट्स्क र लुहान्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको रुपमा मान्यता दिनुपर्छ।
युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि रुसले पहिलोपटक स्पष्ट रुपमा आफ्नो बयान सार्वजनिक गरेको हो। यी सर्तहरु मानेको खण्डमा मात्र रुसले युक्रनमा आक्रमण रोक्ने विषय युक्रेनलाई पहिल्यै ज्ञात भएको पेस्कोभको भनाइ छ।
सो क्रममा रुसले युक्रेनको एक इन्च जमिन पनि नचाहिएको पेस्कोभले बताए। उनका अनुसार युक्रेनले विदेशी गठबन्धनलाई युक्रेनमा घुस्न दिन बन्द गर्नुपर्छ।वास्तवमा युक्रेनको संविधानमै युक्रेन नेटो गठबन्धनमा संलग्न हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ।
यो संविधानमा बदलाव ल्याएर युक्रेनले तटस्थताको सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने रुसको प्रमुख सर्त हो। युक्रेन पूर्व रुस अर्थात् सोभियत संघको राज्य थियो। सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतनपछि युक्रेन अलग राष्ट्र बनेको थियो।
रुसले युक्रेन र पश्चिमा राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई रुचाउँदैन। सोही कारण यतिबेला युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेको हो। रुसले स्पष्ट रुपमा नेटोलाई युक्रेन सो संगठनमा आवद्ध नहोस् भन्ने ग्यारेन्टी चाहिएको बताएको थियो।
तर नेटोले कुनै पनि युरोपेली राष्ट्र नेटोमा आवद्ध हुनसक्न भनेपछि रुसले युक्रेनमा हमला सुरु गरेको हो। यसअघि सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्राइमिया क्षेत्र कब्जा गरेको थियो। सो क्षेत्रलाई पनि युक्रेनले रुसी क्षेत्र मान्नुपर्ने रुसको सर्त छ।
यस्तै गत महिना रुसले युक्रेन सरकारको विरुद्धमा रहेका दुई युक्रेनी क्षेत्र लुहान्स्क र डोनेट्स्कलाई स्वतन्त्र राज्यको घोषणा गरेको थियो। यी दुई राज्यलाई पनि युक्रेनले स्वतन्त्र क्षेत्र मान्नु पर्ने रुसको भनाइ छ। बीबीसीको सहयोगमा।